Indlela yokuhlambulula kakuhle ubuso
Ukusikwa kwe-facial yinkqubo enokukwazi ukudibanisa imnandi kunye nencedo. Ukwenza umlenze wobuso obuhle kunzima kakhulu, ngenxa yobuhlungu besisu, ulusu lwakho luya kuhlala ixesha elide kunobutsha kwaye luphilile. Ukusikwa kwesisu kukwahlula kwiintlobo ezintathu. Uhlobo lo kuqala lubizwa ngokuba yi-classical, yesibini iplastiki, kwaye yesithathu ikhutshwe. Zonke ezi ntlobo zintathu zenziwe ngokwemiqathango eyahlukileyo. Ukusikwa kwe-massage ye-classical kwenziwa ngosizo lwe-cream okanye i-oil massage, isetyenziselwa ukuxhasa ithoni ye-muscle.
Ukupilisa kweplastiki kwenziwa, ukuba unobuso obugcwele kunye nolusu lwezilusu zobuso, kufuneka ube nempembelelo enamandla. Ukuxilisa kwenziwa ngaphandle kokhilimu.
I-massage ye-pinch ithathwa ngokuba yomeleleyo. Uguqa ulusu kwaye luquka ukugqithisa, oku kuhlambalaza akufanelekanga wonke umntu. Yenziwa ngamathala elukhumbeni, kunye ne-seborrhea okanye ngeentsimbi ezinzulu.
Ukuba uphule ubuqhetseba besikhumba, amanxeba, i-herpes, kufuphi neenqanawa zesikhumba, ungcono ukuyeka ukuhlaziya ubuso. Ukwenza inkqubo yokusikwa kwe-facial facial, yonke intshukumo yakho, kufuneka ibe mnene kwaye uqaphele. Ukuba ufuna ukufezekisa imiphumo emihle, kufuneka usibambe ngobumnene ubuso bakho, kodwa ungayicongi.
Isiseko phantsi kobulali obusweni, kufuneka ukhethe, ukuthembela kwimeko yesikhumba sakho. Ukuba unobumba lobomileyo obomileyo, kulungele ukusebenzisa i-creamled cream. Ukuba unesikhumba seoli, uthanda ioli yeoli. Kwioli yeoli, faka amaconsi ambalwa ejisi lemon. Kwakhona unokwenza ioli ecocekileyo kakhulu yokususa i-almond kunye neoli ye-almond, kufuneka ibe neengxenye ezilinganayo.
Unako ukujongana nokuqhathaniswa kweqhwa usebenzisa i-cubes. Olu hlobo lokusilalisa luyimpumelelo enkulu kwaye lulula kumsebenzi walo. Ukuxilisa kunika umntu umbala omhle ophilileyo kunye nefuthe elihle. Kodwa okokuqala, kufuneka uqaphele ukuba isikhumba sakho sichaphazela njani kumacandelo kwaye nokuba ubomvu kunye nobundlobongela buya kubonakala. Yaye ukuba le miqondiso ingabonakali, unokwenza ngokuzikhulula oku kuhlambalaza imihla ngemihla.
Indlela yokwenza ukuhlalisa ubuso obunene:
Ukusuka kwiindawo ezisecaleni zempumlo ukuya kwietempileni, ukusuka kwinqanawa ecaleni lomhlathi osezantsi ukuya endlebeni. Ukusuka emlonyeni ophezulu kunye nengxenye ephezulu yendlebe. Kwakhona udinga ukwazi indlela yokwenza i-massage kweso. Ukuhlamba ijwabu eliphezulu ukusuka kwikona elingaphakathi liso ukuya kwinqanaba elingaphandle. Kodwa inkophe ephantsi, yenza, ngokuchaseneyo, ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi.
Naliphi na ibhinqa kufuneka likwazi ukwenza ukuhlalisa ubuso obunene.
U-Elena Romanova , ngakumbi kwisiza
Iimaski zeengxaki zesikhumba, ubuso bomaski we-acne
Ungakhetha njani i-beauty beautician?
Ukuphulukisa kunye nokuvuselela ubuso
Indlela yokuhlaziywa kwesikhumba aze alahle ukuvuvukala phantsi kwamehlo?
Masks ebusweni, zokupheka ekhaya
Igama elitsha kwi-cosmetology: i-3D Mezoniti
Ukufunda kwiitoni zepinki: i-perfume entsha eLalique Rêve d'Infini
Umdlali omdumileyo uNonna Grishaeva
Inzuzo ye-anyanisi ubuhle kunye nempilo
I-pizza "Iisisi ezintathu" kunye ne-Pesto sauce
Crostini nge sikwashi kunye ne-ricotta
Ulungelelaniso lweHormon kwixesha lokugqibela
Umntwana akayidli inyama nemifuno
Imvakalelo yomntu othandekayo
Kuthekani ukuba umyeni wam unesidima, uyethusa?
I-pie ne mackerel
Ungatshintsha njani uhlobo lomyeni wakhe?
Indlela yokuphila kude kube ngumtshato wegolide
Tshintsha ingaphakathi ngezandla zakho